Nweta nnweta | Nleta Hultsfred
Obodo nke Hultsfred dị n'azụ weebụsaịtị a. Anyị chọrọ ka ọtụtụ mmadụ nwee ike iji weebụsaịtị ahụ. Akwụkwọ a na-akọwa etu hultsfred.se si soro iwu banyere ịnweta ọrụ ọha na eze dijitalụ, nsogbu nsogbu ịnweta ọ bụla na otu ị ga-esi kọọrọ anyị adịghị ike anyị ka anyị nwee ike idozi ha.
Enweghị nnweta na visithultsfred.se
Ugbu a, anyị maara na anyị enwebeghị ike imezu njirisi niile dị na WCAG na isi ihe ndị a, n'etiti ndị ọzọ.
Enwere akwụkwọ pdf na weebụsaịtị ahụ anaghị adị mfe. Fọdụ n'ime pdf faịlụ, ọkachasị ndị okenye, na websaịtị bụ akwụkwọ nyocha a na-enyocha enweghị akwụkwọ ọ bụla dịka ha dabere na dọkụmentị na-anaghị digitized. Anyị enweghị ohere bara uru iji dozie nke a.
Akụkụ nke weebụsaịtị ahụ adịghị emezu ihe ndị achọrọ banyere, dịka ọmụmaatụ, ọdịiche na nhazi.
Fọdụ onyonyo dị na saịtị ahụ enweghị ederede ọ bụla.
Ọtụtụ tebụl na weebụsaịtị enweghị nkọwa table
Onwere e-ọrụ na ụdị nke anaghị egbo ụkpụrụ nnweta.
Anyị amalitela ọrụ ịhazi ọrụ iji dozie adịghị ike nke nnweta na ịzụ ndị editọ weebụ anyị.
Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịnwee ihe mgbochi
Anyị na-agbasi mbọ ike iji melite nnweta weebụsaịtị. Ọ bụrụ n ’ịchọta nsogbu ndị anaghị akọwapụta na ibe a, maọbụ ọ bụrụ na ị kwenye na anyị anaghị eme ihe iwu chọrọ, mee ka anyị mara ka anyị wee mara na nsogbu ahụ dị. Nwere ike ịkpọtụrụ ebe anyị na-akpọtụrụ na:
Ekwentị: 0495-24 00 00
Kpọtụrụ ndị nlekọta nlekọta
Ikike nke ochichi dijitalụ bụ ọrụ maka ilekọta iwu banyere ịnweta ọrụ ọha na eze dijitalụ. Ọ bụrụ n’ịjughi afọ ojuju etu anyị si ejikwa echiche gị, ị nwere ike ịkpọtụrụ Ndị Nchịkwa Achịkwa Dijital wee kpesa ya.
Kedu ka anyị si nwaa saịtị ahụ
Anyị emeela nyocha nke onwe nke hultsfred.se. Emere nyocha kachasị nso na 20 August 2020.
Emechara emelitere akụkọ a na Septemba 8, 2020.
Ihe omuma banyere ihe omuma nke weebụsaịtị
Weebụsaịtị a na-ekwenyekarị na Iwu Ọha na Akaụntụ Ndị Ọrụ Ọha, n'ihi adịghị ike nke akọwara n'elu.